Inani legolide eliboniswe kule ncwadi yemibala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubuhle bemathematika kule ncwadi ibalaseleyo yemibala
URafael Araujo ngu Umyili weVenezuela kunye nomzobi. Ungasebenzisi nto ngaphandle kweepensile, iirula, kunye nekhampasi ukuyila iziqwenga ezintle kunye ezichanekileyo ukubonisa ubuhle bendalo.
Imifanekiso kaRafael yimele inamba yegolide, inani elingenangqondo elimelwe yileta yesiGrike ukuhlonipha umkroli wamaGrike uPhidias. Inani le-algebra elingenangqondo elineepropathi ezininzi ezinomdla kwaye lafunyanwa kumaxesha amandulo njengenxalenye phakathi kwamacandelo amabini omgca. Eli nqanaba lifunyenwe kokubini kwamanye amanani ejometri nakwindalo.
Kwindalo sinokuyifumana kwimithambo yamagqabi, kubunzulu bamasebe, iqokobhe lenkumba okanye kwiifreyile zikajongilanga. Umsebenzi kaRafael ngu eyahlukileyo kwaye ishiya imigca yokwakha ihleli ezenza imathematika yemifanekiso yazo. Abanye banokukuthatha ngaphezulu kweeyure ezili-100 ukuba ugqibe.
Ngenxa yezicelo ezifunyenweyo zemisebenzi yakhe, wafumana umbono wokuvelisa incwadi enombala ngeminye yeyona mizekeliso ibalaseleyo. Ukuzisa iprojekthi ebomini, uRafael kunye neqela lakhe eSydney benza iphulo Kickstarter.
Njengoko ubona kwimifanekiso yi umsebenzi omangalisayo nomhle apho ukulandelelana kwamabhabhathane okanye okweqokobhe kubonisa inqanaba lokugqibelela kwelo seti yokubala kwemathematika abakwaziyo ukukuqikelela.
Kulindeleke ukuba ngenyanga kaJuni Iincwadi ezi-odoliweyo zingaqala ukuthunyelwaUkusukela, ukusukela kwinjongo yokuqala ye- $ 27.000, ngeli xesha bayigqithisile ngoku kude ukuya kuthi ga kwi-219.789 yeedola. Incwadi enemibala ekhethekileyo enokuba sesona sipho silungileyo sothandekayo okanye umhlobo ngokusisiseko kwaye uyile kakhulu.
Apha uyakwazi Olona luhlu luthengisa kakhulu kwiAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ubuhle bemathematika kule ncwadi ibalaseleyo yemibala
I-Hipster Touch kwiGrisi yakudala nguLéo Caillard
Ukuhlaziywa kweempawu ezintsha zikaGoogle zokudlala